Sidee looga Baxa Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee looga baxayaa twitter-ka?
April 28, 2021 0 comments 343
Ilaalinta magacaaga iyo isgarad-furahaagu waa inay noqdaan tallaabo muhiim ah si looga hortago dhinacyada saddexaad ee damiir laawayaasha ah inay u helaan qorshayaal xaasidnimo ah koontadaada. Gaar ahaan markaad gasho aalado aanad adigu lahayn.
Marka waa lagama maarmaan inaad ogaato sida looga baxo astaantaada si sax ah tanina ma aha mid banaanka soo dhigaysa.
Tallaabooyinka looga baxayo twitter-ka ayaa ah kuwa ugu fudud ee la raaco marka la maareynayo barxadda.
Ka bixitaanka twitter waa tallaabada ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee shabakaddan bulshada
Ka soo qaado kombuyuutarkaaga
Haddii aad ka soo gasho biraawsarka desktop-ka, waxaad arki doontaa isku-xirka twitter-ka ee caadiga ah. Dhinaca bidix waxaa ku yaal tiir leh qaybo taxane ah. Bartamaha waxaa ku yaal jadwalka ama jadwalka oo dhammaan tigidhada la heli karo, labadiinaba iyo kuwa raacsanba oo la raacay.
Dhinaca midig waxaa ku yaal khaanad kale oo leh miirayaasha raadinta dadka iyo goobta. Qaybta dhexe ee qormadan waxa ku jira dhammaan isbeddellada xilligan jira. Qeybta hoosena waxaad kaheleysaa talo soo jeedinta ah inaad raacdo. Santuuqa fariinta sidoo kale waa la heli karaa.
Qaybta ugu muhiimsan ee la sameeyo waxaad rabto waxay noqon doontaa geeska bidix ee hoose ee shaashadda, halkaas oo aad ka arki karto sawirkaaga astaanta iyo magacaaga. Qeybtaan waxaad ka heli doontaa seddex ellipsis. Iyaga oo ku riixaya waxay muujinayaan tab yar oo leh laba ikhtiyaar; "Kudar akoon jira" iyo "log out".
Riix astaanta "log out" Kadib tab ayaa lagu soo bandhigi doonaa qaybta dhexe ee shaashadda iyada oo su'aasha ah "Ma rabtaa inaad xirto kulanka twitter-ka?".
Su'aashan, twitter waxay kula socodsiin doontaa inaad gali karto wakhti kasta. Sidoo kale, haddii aad kaliya rabto inaad bedesho xisaabaadka, waxaad aadi kartaa qaybta si aad ugu darto koonto jirta.
Waxaad heli doontaa laba ikhtiyaar "baajin" iyo "fadhi xira". Guji fadhiga dhow si aad u dhamayso hawsha. Marka tan la sameeyo, bogga waxaa lagu cusbooneysiin doonaa dhammaan astaamaha astaamaha ee bogga, si aad mar kale u geli karto waqti kale.
Ka soo qaad taleefankaaga casriga ah
Tag arjiga twitter-ka kalfadhigii la bilaabay. Interface-ka waxyar ayuu kaga duwan yahay nooca webka. Waqtiga ayaa ah midka ku fadhiya booska ugu weyn, halkaas oo dhammaan tweets-kii ugu dambeeyay laga helo jaleecada hore.
Qeybta hoose, waxaa jira afar icons, kuwaas oo ka socda bidix ilaa midig: cusbooneysiinta koowaad, raadinta labaad, ogeysiinta seddexaad iyo tan afraad, fariinta.
Xuquuqda geeska midig ee hoose, waxaad ka heli doontaa astaanta qalinka u eg si aad u sameysid fariin cusub. Si aad u baxdo, waa inaad tagtaa geeska bidix ee kore, halkaasoo sawirkaaga sawirka uu yaalo.
Markaad gujineyso sawirka, menu ayaa lagusoo bandhigi doonaa dhammaan qaybaha astaanta. Midig xagga hoose ee meeriskan la soo bandhigay wuxuu ku yaal "fadhi ku dhow". Isla markiiba ka dib markaad riixdo kan dambe, ogeysiiska ogeysiinta ayaa ka muuqan doona qaybta dhexe ee shaashadda, oo la mid ah nooca shabakadda.
Si aad u dhamayso waxaad riixdaa meel u dhow kalfadhiga.
1 Ka bixitaanka twitter waa tallaabada ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee shabakaddan bulshada
1.1 Ka soo qaado kombuyuutarkaaga
1.3 Ka soo qaad taleefankaaga casriga ah
Waxaan rabaa in aan tirtiro koox Facebook ah
Sidee Loogu Isticmaalaa Kooxaha TweetDeck barta twitter?